Kudya Nokurwisa Kwemarware? - Semalt ari kuuya kununura!
Lisa Mitchell, iyo Semalt Mutevedzeri weVatengi vanobudirira, anonyevera kuti nguva dzose inofanirwa kudzivisa mamwe mawebhusayithi nemapurogiramu pavanoshandisa internet. Izvi ndezvokuti mamwe mawebsite nehurongwa ane zvirwere, Trojan, uye hutachiona zvinopesana nekushanda kwekombiyuta. Uyezve, zvirongwa zvinokuvadza uye mawebsite zvinogona kukonzera mhaka dzekudzivirira nekuzivikanwa uye mari yezvakawanda - especializacion en fotografia arquitectonica.
Kune huwandu hunopararira hwehutachiona hwepakombiyuta. Aya mapurogiramu anosanganisira malware, software yekutengesa, nemashoko ekuzivisa. Iyo hurukuro inopa urongwa hwezvirongwa zvakasiyana-siyana uye mawebsite anogona kuisa njodzi kumushandisi we internet. Zvakakosha kuti mushumiri anzwisise kuti mawebsite uye mapurogiramu emakombiyuta emakambani anozivikanwa anogonawo kutapukirwa nehutachiona zvirongwa. Izvi zvinopesana nekuti vashandi veLuzivo reZvesa vanoshandisa zvakawanda zvakaoma nemari mukugadzirisa zvirongwa uye mawebsite ekambani. Nyaya yacho haisi yakazara nokuti haigoni kuvimbisa kuti muchengeti wepaIndaneti haazosangana nematambudziko e-malware, Trojan, kana virusi paanenge achitarisa internet.
Kune makombiyuta ekuchengetedza makombiyuta ayo vashandisi vanogona kuaona pavanotarisa web. Semuenzaniso, mushandisi anofanirwa kuwana nzvimbo dzepaIndaneti achishandisa iyo isiri iyo yekushandisa. Mamwe mashoko pamusoro pekuchengetedzwa kwemakombiyuta anogona kuwanikwa kubva pawebsite inotevera: it.unh..edu / bestpractices. Uyezve, mutengi anogona kutsvaga ruzivo rwekombiyuta kubva kune Information Technology technicians kana Dhipatimendi reZvesa Technology yeSangano.
Nhamba yeIndaneti Inotyisa:
Mawebhusayithi anopa mahara pasina mazano
Zvivaraidzo zvepaIndaneti zviripo zvinopa mimhanzi yepirated, video, kana software download services. Muenzaniso wechirongwa chekuvaraidza chekutsvaga yepaiti "Warez."
Inotsvaga kutsvaga injini. Vashandisi veIndaneti vanorayirwa kuti vashandise injini dzakawanda dzekutsvaga dzakadai seBing, Google, uye Yahoo.
Websites dzinoda kutora kana kuisa kuti zvibvumirwe
Mitambo yeIndaneti yeIndaneti, kana web-based Flash
Coupon uye bhizinesi rese nzvimbo
Nzvimbo dzechitatu dzemasayithi anopa zvipo pamutero. Aya mazano anopiwa nekambani yepakutanga pasina mari. Mienzaniso yezvimwe zviitiko zvekutsvaga zvikamu zvechitatu zvinosanganisira zvikwereti zvekweretheni dzekwereti, zvinyorwa zvevanhu vakawanda, ruzivo rwekufambisa, uye mapepa epaintaneti
Vanhu Vasina Kutsvaga Nzvimbo
Vashandisi veIndaneti vanofanirwa kuchengeta mawebsite anopa mahara ekubvisa mahara. Izvi ndechokuti mamwe mafaira kana maitiro aya kune mawebsite akashandurwa neasingadiwi software, malware, Trojan, kana utachiona.
Unhu hwehutachiona hahuna kunaka, uye izvi zvinogona kuita kuti kombiyuta ione zvinetso zve software uye hardware. Uyezve, iyo malware yakavharidzirwa inogona kukanganisa kashandisi yemushandisi kuburikidza nekuba deta kana kuparadza mafaira akakosha. The software download site iyo inofanira kudziviswa inosanganisira:
"Exclusive" kana zvipo zvekusununguka
Kuvaraidza kunyorerwa mimhanzi, mavhidhiyo, kana mitambo
Kuvhara maitiro antivirus kana kuti yehutaneti zvirongwa
Indaneti "Kukurumidza Ups"
Makadhi ekukwazisa eElectronika
Mutengo Key Generators
Tsvaga Engine Engine
Inoshandisa webhutti inofanira kungotora mapurogiramu epakombiyuta kubva kumawebsite ane mbiri. Vashandi vanofanirwawo kuvimbisa kuti kombiyuta ine hurongwa hwekuchengetedza uye huripo kusvika kune zuva hunodzivirira kombiyuta kubva kune malware, Trojan, kana kurwisa utachiona.